MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ကရုဏာအဖွဲ့က တရုတ်မှပြောင်းလာသော ဒုက္ခသည်များကို ဆန်နှင့်အစားအစာ ကူညီပေး
ကရုဏာအဖွဲ့က တရုတ်မှပြောင်းလာသော ဒုက္ခသည်များကို ဆန်နှင့်အစားအစာ ကူညီပေး
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တပ်မဟာ ၃ နယ်မြေတွင် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့နှင့် KIA တပ်ဖွဲ့ကြား တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားနေ သည့်ကြား က ကရုဏာကူညီရေးအဖွဲ့မှ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေရှိ လနာ့ဇွပ်ဂျာ (Lana Zup Ja) ဒုက္ခသည်စခန်းသို့သွားရောက်ကာ ဆန်အိတ် ၇၀၀ ခန့် နှင့် လိုအပ်သော အစားအစာများကို လာရောက်ကူညီပေးခဲ့သည်။
ကရုဏာကူညီရေးအဖွဲ့မှ လနာ့ဇွပ်ဂျာ (Lana Zup Ja) ရှိ ဒုက္ခသည်များ အတွက် တစ်လစာ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆပ်ပြာ များနှင့် ငွေကြေးများလာရောက် ကူညီသွားခဲ့ကြောင်း လနာ့ဇွပ်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူ ဆရာမ ဂျီးမိုင်ကပြောသည်။
“မနေ့ညက ၅ နာရီလောက်မှာရောက်လာတာ။ အင်္ဂါနေ့ညလည်း ဆန်အိတ် ၁၀၀ ကျော် ကား ၃ စီးနဲ့ဟုတ်တယ်။ အခုကားတစ်စီးလိုသေး တယ်တဲ့ ဆန်အိတ်အကုန်လုံးဆိုရင် ၇၀၀ ကျော်မယ်လို့ပြောတယ်။”
၎င်း ဆန်၊ ဆီ၊ ဆပ်ပြာများကို လနာ့ဇွပ်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် စက်တက်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ဝေငှ ပေးမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ရက်များတွင် ဘွမ်စစ်ပါ ဒုက္ခသည်စခန်းနှင့် အခြားဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်လည်း ကူညီပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဗန်းမော်မြို့အခြေစိုက် ကရုဏာကူညီရေးဝန်ထမ်းများသည် စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် စခန်းသို့ကားဖြင့်သွားနေချိန် KIA တပ်မဟာ ၃ နယ်မြေ စိန်လွန်( Sinlum) နှင့် ဗြန်ဝိုင် (Byeng Wai) ကြားရှိ ပန်ရှန် (Pang Shan) ကျေးရွာတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသောကြာင့် ၄င်းတို့လုံခြုံရေးအတွက် အတော်အတန်စိုးရိမ်ခဲ့ရသည်ဟု ကရုဏာအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ ဆရာနော်ဒင်းက ပြောသည်။
“မနေ့ကလိုမျိုး သူတို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ရှေ့မှာတင် ဗုံးပေါက် လာတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတော့ လုံခြုံရေးက နည်းနည်းကြောက်ရတာ တွေရှိတယ်။”
တရုတ်နိုင်ငံ နောင်တောင်း (Nongdao) ခရိုင်တွင် ထွက်ပြေးခိုလှုံနေရာမှ တရုတ်အစိုးရက နေရပ် ပြန်လည်နေထိုင်ခိုင်းလိုက်သည့်အတွက် ကချင်ပြည်နယ် လနာ့ဇွပ်ဂျာ (Lana Zup Ja) ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ပြန်လည်ပြောင်းရွှ့နေအခြေချခိုလှုံလာသော ဒုက္ခသည်များကို ကရုဏာ ကူညီရေးအဖွဲ့များသည် ဒုတိယကြိမ် လာရောက်ကူညီခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည် စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင်လည်း Wunpawng Ninghtoi (WPN) မှ ကြက်သွန်၊ ငရုပ်၊ အာလူး၊ ပဲသီး၊ ဆား နှင့် အမျိုးသမီးလစဉ် သုံးပစ္စည်းများကို တလစာအတွက် လာရောက်ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း လနာ့ဇွပ်ဂျာ တာဝန်ရှိသူများပြောသည်။
လနာ့ဇွပ်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်ရှိသော ဒုက္ခသည်များသည် ကျေးရွာ ၇၀ မှ ထွက်ပြေးရောက်ရှိ ခိုလှုံလာသူများဖြစ်ပြီး ယခုချိန် အိမ်ထောင်စု ၆၀၂၊ လူဦးရေ ၂၆၉၉ ဦးရှိကြောင်း ၎င်းဒုက္ခသည်စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူ ဆရာမ ဂျီးရာ (Saranum Ji Ra) ကပြောသည်။
တရုတ် နောင်တောင်းခရိုင်တွင် စခန်း ၆ ခု ထားရှိကာ ခိုလှုံနေသော ဒုက္ခသည်များကို တရုတ်အစိုးရသည် တိုက်ပွဲများရပ်သွားပြီဖြစ်သော ကြောင့် မိမိနေရပ်သို့ ပြန်လည်ခိုလှုံရန် ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်း ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်မူ တိုက်ပွဲများနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီး ဒုက္ခသည်များအတွက် စားဝတ်နေရေး၊ ပညာရေးစသည့် လိုအပ်ချက်များအတွက် အခြေခံမှအစ ပြန်လည်ထူထောင်ပေးနေ ရခြင်းလည်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
at 9/14/2012 04:03:00 PM
23/11/2016 တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေသောနေရာ
(Lachid Kachin) ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဒေသများတွင် မြန်မာ စစ်တပ် နှင့် FUA, မြောက်ပိုင် ညီနှောင် မဟာမိတ်တပ် များ ယနေ့ (၂၃၊၁၁၊၂၀၁၆) ရက...
ဘာလဲဟဲ့ စရခ (စရဖ) ဆိုတာ ဘာလဲ (၁)
(မိုးဇေညိမ်း) (ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန) (ပုံစာ-စရဖ ၏ လက်ရှိအကြီးအကဲ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေ) မြန်မာ ပြည်သူတွေ ကို ဆယ်စုနှစ် ပေါင်းများစွာ စိ...
KIA အပေါ် တဖက်သတ် စွပ်စွဲချက်များ အစိုးရ ၀ါဒဖြန့်နေ
ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန ဇန်န၀ါရီလ (၂၉) ၂၀၁၃ ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA အဖွဲ့က ဖားကန့်မြို့နယ်ရှိ ရတနာတောင်တန်း ကုမ္ပဏီအား ယမာန်နေ့တွင် မ...
မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်ဂိတ်အနီးတွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်၊ သေဆုံး ဒဏ်ရာရမှုများရှိ
(DVB) အစိုးရတပ်နဲ့ တအာင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (တီအန် အယ်လ်အေ) တို့ ဒီနေ့ မနက် ၅ နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်က တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် ...
▼ September9- September 16 (37)
ဆွတ်ငိုင်ယန်ရွာသားများ၏ ပစ္စည်းများ ဗမာစစ်သားများခု...
တရုတ်၊ မြန်မာအစိုးရတို့၏ ကချင် ဒုက္ခသည်အပေါ် ကိုင်တွ...
KIA အပေါ်ကျင့်သုံးနေသော ဖြတ်လေးဖြတ် စစ်ဆင်ရေးထဲက လူ...
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု မအောင်မြင်သရွေ့ အပစ်ရပ်ခြင်းမ...
SADUNG SAGA PA DE NA MYEN HPYEN NI HTINGNUT
SARA AWNG MYAT HPE MYEN HPYEN NI SHAGA NNA SAN JEP...
ဖားကန့် ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ဒုက္ခသည် တဦး သေဆုံး၊ေ...
ဗမာစစ်သားအရက်မူးပြီး ၉ တန်းကျောင်းသူကိုပစ်သတ်
ဗမာစစ်သားများ အရက်မူးပြီး ဆွတ်ငိုင်ရန်ရွာအား လက်နက...
ကရုဏာအဖွဲ့က တရုတ်မှပြောင်းလာသော ဒုက္ခသည်များကို ဆန်...
ကေအိုင်အိုနှင့်အစိုးရတပ် ဖားကန့်မြို့တွင်း တိုက်ပွ...
SLG. MARIP AWNG HPE MYEN HPYEN LA NI ADUP ZINGRI
MAW WAN MAW MAKAU KAW GASAT
KIA နှင့် လွယ်ဂျယ်အနီးတိုက်ပွဲတွင် အစိုးရတပ် ၂၆ ဦ...
နေပြည်တော်လာရန် KIO ကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဖိတ်ကြား
ဖားကန့် ရေမဆေး ကောက်သူများကို အစိုးရစစ်တပ် ဖမ်းဆီး...
MHH NI HK-L-Y (16) HPE SA HTIM GASAT
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ထိုးစစ်ဆင်မှု ရပ်ဆိုင်းဖို့ ENC ...
KIA ဖမ်းမိသော စစ်သုံ့ပန်းထဲက ကလေး စစ်သားများကို IL...
ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပဖို့ KIO ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ...
KIA တပ်ရင်း ၆ မှ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူ
သံလွင်ဧရာကုမ္မဏီ ယမ်းတန်ချိန်များစွာ စွန့်ပစ်မှု ဖား...
DUNG (1) NI PADANG DIP
အစိုးရတပ်များ လွယ်ဆာရွာသား ၅ ဦးအား ဖမ်းဆီးနှိပ်စက...
ဗမာစစ်တပ်မှ သံလွင်ဧရာကုမ္ပဏီရှိ ယမ်းများဖျက်ဆီး
ကချင် အရပ်သားများကို စစ်တပ်က လက်နက်ကြီးနှင့် ပစ်ခတ...
ကချင် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် ၅၀၀၀ နီးပါး တရုတ် ပြန်ပို့
ဖားကန့် မလန့်မှော်တွင် ဗမာစစ်တပ်မှ ရဟတ်ယာဉ်ကွင်း တ...
လိုင်ဇာအနီး 105 မမ ရောက်နေပြီးဖြစ်ကြောင်း သမ္မတအား ...
တိုက်ပွဲမစဲတဲ့ ဖားကန့်ဒေသ စီးပွားရေးနစ်နာ
ဗမာစစ်တပ်မှ လဂျားယန်ကျေးရွာသို့ လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ...
ပြည်တွင်းစစ်တွင် ဆုတံဆိပ်များပေးခြင်းသည် စည်းလုံးမ...
ဇခုန်တိန်းယိန်း၏ လုံခြုံရေးစခန်းတစ်ခု KIA သိမ်း
GALOI DU HKRA NAW KAM SHUT NGA NA GA TA?
ငြိမ်းချမ်းရေးကို အစိုးရဖက်ကသာ မျက်ကွယ်ပြု နေသည်ဟု...